जाभी बार्सिलोनाको प्रशिक्षक बन्न तयार ! | Hamro Khelkud
जाभी बार्सिलोनाको प्रशिक्षक बन्न तयार !
एजेन्सी – स्पेनिस भेट्रान मिडफिल्डर तथा कतारी क्लब अल सादका प्रशिक्षक जाभी हर्नान्डेजले आफ्नो पूर्व क्लब बार्सिलोनाको प्रशिक्षक बन्न तयार रहेको बताएका छन् ।
स्पेनिस पत्रिका मुन्डो डिर्पाेटिभोका अनुसार जाभीले ६१ वर्षीय क्विके सेटिन बसिरहेको हट सिटमा बस्न आफु तयार रहेको उल्लेख गरेका छन् । सेटिन गत जनवरीमा बार्सिलोनाको प्रशिक्षक बनेका थिए । त्यतिबेला नै बार्सिलोनाले जाभीलाई प्रशिक्षक बन्न प्रस्ताव राखेपनि अनुभवको कमी रहेको र कुनै न कुनै दिन बार्सिलोनाको प्रशिक्षक बन्ने बताएका थिए ।
एर्नेस्टो भाल्भेर्डेको प्रशिक्षणमा बार्सिलोनाले राम्रो प्रदर्शन गर्न नसकेपछि बार्सिलोनाले सेटिनलाई प्रशिक्षक बनाएपनि सेटिनको प्रशिक्षणमा बार्सिलोनाले सोचेअनुरुपको प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् । क्लबका कप्तान लियोनेल मेस्सीले सेटिनको ब्रान्डले क्लबले कुनैपनि उपाधि जित्न नसक्ने सार्वजनिक रुपमै बताएका थिए ।
मुन्डोका अनुसार जाभी वार्षिक ५.४ मिलियन पाउन्डमा क्लबको प्रशिक्षक बन्न तयार छन् । उनले यो सिजनको अन्त्ससँगै क्लबको प्रशिक्षण सम्हाल्ने आन्तरिक सहमति भइसकेको छ । तर, यो क्लबको बोर्ड र खेलाडीहरुबीचको निर्णयमा भर पर्नेछ ।
जाभीको विषयमा छलफलका लागि खेलाडीहरु सन्तुष्ट रहेको बताइएको छ । पछिल्लो समय मेस्सीले पनि क्लब छाड्ने मनासय बनाइरहेका छन् । जाभी बार्सिलोनाको प्रशिक्षक हुने भएमा मेस्सीले क्लब छाड्ने निर्णय फिर्ता लिन सक्नेछन् ।
जाभीले गत समरमा नै दुई वर्षको लागि कतारी क्लब अल सादको प्रशिक्षण भार सम्हालेका थिए । उनले सोही क्लबबाट खेल्दै व्यवसायिक खेल जीवनको अन्त्य गरेका थिए । मिडफिल्डको बादशाह मानिने जाभीले बार्सिलोनाका लागि ७६७ खेल खेल्दै ८५ गोल गरेका छन् । जाभी ११ वर्षको उमेरदेखि बार्सिलोनाको एकेडेमी ला मासियामा हुर्किएका हुन् ।
चारपटकको च्याम्पियन्स लिग विजेता ४० वर्षीय जाभीले एक भिडियो कन्फ्रेसमा सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य भनेको बार्सिलोनाको प्रशिक्षक हुनु र बार्सिलोनालाई जितको लयमा फर्काउनु रहेको बताएका थिए ।
सेटिन बार्सिलोनामा आफ्नो भविष्यको बारेमा संघर्ष गर्दैछन् । धेरैले उनलाई यो सिजनको अन्त्यसँगै बर्खास्त गर्न सक्ने बताइरहेका छन् । बार्सिलोनाको बोर्ड बार्सिलोनाको प्रदर्शनलाई लिएर चिन्तित छन् । खेलाडीहरुले पनि प्रशिक्षण टोलीको रणनीतिलाई इन्कार गर्दै आइरहेका छन् ।